नियमित शारी'रिक स'म्बन्ध राख्ने महिलाहरु कसरी चिनिन्छन् ? - Nawalpur Dainik
नियमित शारी’रिक स’म्बन्ध राख्ने महिलाहरु कसरी चिनिन्छन् ?
महिलाहरु प्राकृति रुपमा नै आफैमा सुन्दर हुन्छन् । उहीहरुको सुन्दरताको सदाबहार तारिफ नै हुन्छ । तर पुरुषको तुलनामा महिलाको शारी’रिक बिहे लगत्तै नै प’रिवर्तन भइहाल्छ । के कारण छ त्यसको पछाडी रु सर्वे युनिभर्सिटी अफ लिड्स का सो’धकर्ताले हालै गरेको अध्ययनका अनुसार निय’मित स’हवास गर्ने महिलाको शारीरिक ब’नावट केही मात्रामा परिवर्तन भए पनि एकदिनमा नै पटक पटक सह’वास’मा लि’प्त बन्ने महिलाहरुको नि’तम्ब अर्थात हि’प फु’लेर ठूलो हुने गरेको पाइएको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका अनुसार यो सर्वेका लागि महिलाहरुको हि’पको सबै भन्दा ठुलो भाग र कमरको सबै भन्दा पातलो भागको नाप लिइयो । यसबाट के पत्ता लाग्यो भने जुन केटिहरुले एक दिनमै पटक पटक
यौ’न स’म्बन्ध राखे उनीहरुको हि’पको आकार अरु महिलाको भन्दा बढी थियो । यो पनि थाहा भयो कि जुन महिलाको कम्मर पातलो हुन्छ उनिहरु बच्चालाई सजिलै जन्म दिन सक्छन् । जसको हि’प ठुलो छ उनिहरुलाइ गर्भवती हुदा खासै स’मस्या नहुने भन्ने अध्ययनले देखाएको। आमाको दूध बच्चाका लागि अमृत समान हुन्छ। ६महिनासम्म स्त’नपान गराउनु आवश्यक मानिन्छ। तर कति वर्षसम्म स्तनपान गराउनेरुयो पनि पढनुहोस्
बेलायतमा जबसम्म आमा र बच्चा चाहन्छन्, त्यति लासम्म स्तनपान गराउन सकिन्छ भनेर सल्लाह दिने गरिन्छ। स्त’नपा’नबाट बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ र उनीहरु बि’रामी पर्दैनन्। बेलायतका नेशनल हेल्थ सर्भिस९एनएचएस० ले पनि स्त’नपा’नका लागि कुनै समयसीमा तोकेको छैन। ६ महिनासम्म आमाको मात्र दूध खुवाउन सल्लाह दिइन्छ। त्यसपछि दूधका साथै अन्य खाद्यपदार्थ खुवाउन सकिन्छ।विशेषज्ञका अनुसार आमाको दूधले बच्चामा कुनै पनि सं’क्रमण हुन दिँदैंन। जबसम्म बच्चाले आमाको दूध खान्छन्, उनीहरुलाई मोटोपनाको समस्या
Prevको हुन यी युवती ? जो ‘बो’ल्ड’ तस्विरका कारण भाइरल बनिन्, हेराैँ १२ तस्बिर
Nextनु’हाउनासाथ नगर्नुहोस् यी पाँच ग’ल्ती, नत्र झ’र्न थाल्छ तपाईंको कपाल